Pristiq vs. Effexor: fahasamihafana, fitoviana ary iza no tsara kokoa aminao - Zava-Mahadomelina Vs. Namana | Desambra 2021
Fanabeazana Ara-Pahasalamana Fanabeazana Ara-Pahasalamana, Vaovao Fiaraha-Monina Zava-Mahadomelina Vs. Namana Orinasa, The Checkout News Fanatanjahan-Tena Mavesatra Fiaraha-Monina, Fahasalamana Fampahalalana Momba Ny Zava-Mahadomelina Mpanao Gazety Fampahalalana Momba Ny Zava-Mahadomelina, Vaovao Fampahalalana Momba Ny Zava-Mahadomelina, Fanabeazana Ara-Pahasalamana Orinasa, Fanabeazana Ara-Pahasalamana Orinasa, Fampahalalana Momba Ny Zava-Mahadomelina Ny Fizahana
Tena >> Zava-Mahadomelina Vs. Namana >> Pristiq vs. Effexor: fahasamihafana, fitoviana ary iza no tsara kokoa aminao
Pristiq vs. Effexor: fahasamihafana, fitoviana ary iza no tsara kokoa aminao
Mihoatra ny Olon-dehibe amerikanina 16 tapitrisa manana famoizam-po (aretin-tsaina lehibe). Pristiq sy Effexor dia fanafody roa malaza voatondro amin'ny fitsaboana ny fahaketrahana, mahazatra toe-pahasalamana ara-tsaina . Effexor XR (extension-release) dia mitsabo ihany koa amin'ny ankapobeny fanahiana fikorontanana, fikorontanan'ny tahotra ary fitaintainanana eo amin'ny fiaraha-monina. Ireo fanafody roa ireo dia nankatoavin'ny United States Food and Drug Administration (FDA). Wyeth Pharmaceuticals LLC, sampana iray an'ny Pfizer, dia manao fanafody roa amin'ny endrika marika.
Pristiq sy Effexor dia voasokajy ao amin'ny vondrona fanafody antsoina hoe SNRI (serotonin-norepinephrine reuptake reuptake). Izy ireo dia miasa amin'ny alàlan'ny fanaraha-maso ny famerenana ny neurotransmitter antsoina hoe serotonin sy norepinephrine ao amin'ny CNS (rafi-pitabatabana afovoany), amin'ny fanatsarana ny soritr'aretin'ny fahaketrahana.
Jereo fa ny anarana mahazatra an'i Pristiq dia desvenlafaxine, ary ny anaran'ny generic an'i Effexor dia venlafaxine. Ireo fanafody ireo dia tena mitovy. Rehefa atao metabolisma i Effexor (venlafaxine) dia lasa metabolite miasa izy — desvenlafaxine.
Na dia samy SNRI aza i Pristiq sy i Effexor dia manana fahasamihafana vitsivitsy izy ireo, izay horesahinay etsy ambany.
Inona avy ireo fahasamihafana lehibe eo amin'ny Pristiq sy i Effexor?
Pristiq sy Effexor dia samy antidepressants SNRI misy amin'ny endrika marika sy mahazatra. Ireo fanafody roa ireo dia ekena hampiasaina amin'ny olon-dehibe.
Pristiq dia azo alaina ho takelaka misy famelana. Ny dosis dia mety miovaova, fa ny fatra mahazatra dia 50 mg isan'andro.
Effexor dia misy amin'ny endrika takelaka, ary koa toy ny kapsily lava-famoahana sy endrika takelaka famoahana maharitra. Ny fatra mahazatra dia 75 na 150 mg isan'andro (famolavolana XR).
Ny fahasamihafana lehibe eo amin'ny Pristiq sy i Effexor
Kilasy zava-mahadomelina SNRI SNRI
Brand / status generic Brand sy generic Brand sy generic
Iza no anarana mahazatra? Desvenlafaxine succinate (desvenlafaxine) Venlafaxine hydrochloride (venlafaxine)
Inona avy ireo endrika miditra amin'ny zava-mahadomelina? Tablet (famoahana maharitra) Takelaka, kapila maharitra, famoahana maharitra
Inona ny fatra mahazatra? 50 mg isan'andro Miovaova: ny fatra mahazatra dia XR 75 na 150 mg isan'andro
Mandra-pahoviana ny fitsaboana mahazatra? miovaova arakaraka ny miovaova arakaraka ny
Iza matetika no mampiasa ny fanafody? olon-dehibe olon-dehibe
Te hanana ny vidiny tsara indrindra amin'ny Pristiq?
Midira ho fampandrenesana ny vidin'ny Pristiq ary fantaro rehefa miova ny vidiny!
Fepetra notsaboin'i Pristiq sy Effexor
Pristiq (Inona ny Pristiq?) Dia aseho amin'ny fitsaboana aretin-ketraka lehibe (MDD) amin'ny olon-dehibe. Indraindray, Pristiq dia voatendry marika tsy fantatra ho an'ny fampiasana hafa.
Effexor (famotsorana eo noho eo) dia aseho amin'ny fitsaboana aretin-tsaina lehibe. Effexor XR (Inona no atao hoe Effexor?) Dia aseho amin'ny aretina miteraka famoifoizana lehibe, aretin-tebiteby amin'ny ankapobeny, aretin-tsaina eo amin'ny fiaraha-monina ary aretina mikorontana.
toe-javatra Pristiq Effexor
Aretim-po lehibe ENY Eny (endrika IR sy XR)
Aretin-tebiteby ankapobeny Label tsy misy Eny (endrika XR ihany)
Aretina ara-tsosialy (phobia sosialy) Label tsy misy Eny (endrika XR ihany)
Aretina mikorontana Label tsy misy Eny (endrika XR ihany)
Mahomby kokoa ve i Pristiq na i Effexor?
ny meta-analysis nijery ny fiarovana sy ny fahombiazan'ny Pristiq sy Effexor. Ny mpikaroka dia nanatsoaka hevitra fa ny fanafody roa dia mitovy amin'ny fahombiazan'ny fitsaboana ny fahaketrahana, ary koa ny voka-dratsy. Na izany aza, ny marary izay nitondra Pristiq dia tsy dia maloiloy kokoa noho ny marary izay nitondra Effexor.
Manantona mpitsabo anao raha mila torohevitra momba ny fitsaboana ianao. Ny mpitsabo anao ihany no afaka mamaritra hoe iza no fanafody tsara kokoa ho anao, mifototra amin'ny toe-pahasalamanao sy ny tantaranao, ary koa ireo fanafody raisinao izay afaka mifandray amin'i Pristiq na i Effexor.
Fampitahana sy fampitahana ny vidin'ny Pristiq vs. Effexor
Ny drafitra fiantohana sy Medicare Fizarana D matetika dia mandrakotra an'i Pristiq. Ny vidin'ny paosy tsy ampoizina amin'ny takelaka mahazatra misy takelaka 30, 50 mg dia $ 380 eo ho eo. Ny karatra SingleCare maimaim-poana dia afaka mampihena ny vidiny hatramin'ny $ 60.
Ny drafitra fiantohana sy Medicare Fizarana D matetika dia mandrakotra ny Effexor XR (ilay karazana Effexor voatendry be mpitia indrindra). Ny vidiny ivelan'ny paosy amin'ny famenon-tsofina mahazatra an'ny kapsily generika 30, 150 mg dia eo amin'ny $ 140. Azonao atao ny mampiasa karatra SingleCare maimaim-poana hampihena ny vidiny eo amin'ny $ 15.
Satria miovaova ny drafitry ny fiantohana ary azo ovaina, mifandraisa amin'ny drafi-piantohana ara-pahasalamanao raha mila fampahalalana momba ny fandrakofana ankehitriny.
Voasaron'ny Medicare Fizarana D? ENY ENY
Fatra mahazatra 30, takelaka famelarana maharitra 50 mg 30, kapila famelarana maharitra 150 mg
Copie Medicare mahazatra $ 1- $ 7 $ 0- $ 20
Sarany SingleCare $ 60- $ 80 $ 15- $ 40
Ny voka-dratsin'ny Pristiq vs. Effexor
Ny voka-dratsin'ny Pristiq mahazatra indrindra dia ny fisaleboleboana, fanina, tsy fahitan-tory, hatsembohana be loatra, fitohanana, torimaso, fihenan-komana, fihenjanana, olana ara-pananahana lahy.
Ny voka-dratsin'ny effexor XR fahita indrindra dia ny fisaleboleboana, torimaso, vava maina, hatsembohana, olana ara-nofo, fihenan'ny fahazotoan-komana ary ny fitohanana.
Ny voka-dratsy hafa dia mety hitranga. Mifandraisa amin'ny mpitsabo anao momba ny lisitry ny vokatra ratsy.
Pristiq Effexor *
Ny vokany Azo ampiharina? hatetika Azo ampiharina? hatetika
maloiloy ENY 22% ENY 30%
Vava maina ENY iraika ambin'ny folo% ENY dimy ambin'ny folo%
fitohanana ENY 9% ENY 9%
Mihena ny fahazotoan-komana ENY 5% ENY 10%
fanina ENY 13% ENY 16%
-tory ENY 4% ENY dimy ambin'ny folo%
mahita tory ENY 9% ENY 18%
tsemboka ENY 10% ENY iraika ambin'ny folo%
Libido nihena ENY 4% ENY 5%
Olana ejaculation ENY 1% ENY 10%
Tsy fetezana / tsy fihenan'ny erectile ENY 3% ENY 5%
* Ny isan-jato voatanisa dia ho an'ny Effexor XR, ny firoboroboan'ny Effexor matetika
Loharano: DailyMed ( Pristiq ), DailyMed ( Effexor XR)
Fifandraisana zava-mahadomelina an'ny Pristiq vs. Effexor
Ny fampiasana antidepressants SNRI miaraka amin'ny mpanohitra MAO dia mety hampitombo ny risika serotonin syndrome , izay mety hampidi-doza. Pristiq na Effexor dia tsy maintsy misaraka amin'ny MAOI fito ka hatramin'ny 14 andro, miankina amin'ny fanafody izay ajanona aloha. Pristiq na Effexor dia tsy tokony hoentina miaraka amin'ny fanafody hafa izay mampitombo ny haavon'ny serotonin, toy ny antidepressants SNRI na SSRI hafa, triptans ho an'ny migraines, ary opioids, noho io antony io ihany. Ary koa, ny dextromethorphan mpanindry ny kohaka, izay hita ao amin'ny Robitussin-DM ary koa ny kohaka sy ny vokatra mangatsiaka maro hafa, dia tokony hialana, satria mety hiteraka ny serotonin syndrome koa raha ampiarahina amin'ny Pristiq na Effexor.
Ny zava-mahadomelina hafa izay mety hifaneraserana amin'ny Pristiq na i Effexor dia misy ny NSAID (zava-mahadomelina fanoherana ny inflammatoire tsy steroidal) toy ny aspirinina na ibuprofen, ary ny anticoagulants (manify ra) toy ny warfarin. Sorohy ny alikaola rehefa mandray Pristiq na Effexor.
Raha Pristiq dia raisina miaraka amina fanafody metabolisma amin'ny anzima antsoina hoe cytochrome P 2D6, ny fanafody hafa dia mety hiakatra amin'ny ambaratonga avo loatra ka mety ho lasa poizina. Mety ilaina ny fanitsiana dosie. Effexor dia tsy manana an'io fifandraisana io.
RONGONY Kilasy zava-mahadomelina Pristiq Effexor
Selegiline Tranylcypromine MAOI (monoamine oxidase inhibitors) ENY ENY
Sertraline Antidepressants SSRI ENY ENY
Naproxen NSAID (fanafody anti-inflammatoire nonsteroidal) ENY ENY
levitra Mpiasa mihena ENY ENY
Tolterodine Zava-mahadomelina novokarin'ny anzima CYP2D6 ENY tsy
Fampitandremana an'ny Pristiq sy Effexor
Ny antidepressants rehetra, ao anatin'izany ny Pristiq sy Effexor, dia manana fampitandremana amin'ny famonoan-tena. Ny fampitandremana anaty boaty no fampitandremana lehibe indrindra takin'ny FDA. Ny ankizy, ny tanora ary ny olon-dehibe tanora (hatramin'ny 24 taona) izay mihinana fanafody antidepressant dia miteraka risika amin'ny eritreritra sy fihetsika mamono tena. Mandeha ny marary rehetra fanafody antidepressant tokony harahi-maso tsara.
Pristiq sy Effexor dia tsy ekena hitsaboana ireo marary zaza.
Ny serotonin syndrome dia vonjy taitra lehibe atahorana ho faty vokatry ny fananganana serotonine be loatra. Ireo marary izay mandray Pristiq na Effexor dia tokony harahi-maso tsara amin'ireo famantarana sy soritr'aretin'ny serotonin syndrome, toy ny hallucination, ny fanintona, ny fiovan'ny tosi-dra, ary ny fikorontanana. Ny marary dia tokony hitady fitsaboana maika raha sendra misy an'io soritr'aretina io. Ireo marary izay mihinana fanafody hafa izay mampitombo ny haavon'ny serotonin (triptans, antidepressants tricyclic, fentanyl, lithium, tramadol, tryptophan, buspirone, dextromethorphan, amphetamines, St. John's Wort, ary MAOIs) dia ahiana ho voan'ny serotonin syndrome.
Pristiq na Effexor dia mety hampiakatra tosidra. Araho maso matetika ny tosidra. Raha tratry ny tosi-dra ianao na marary saina, dia manatona ny mpitsabo anao alohan'ny handraisanao ny Pristiq na i Effexor.
Ny SNRI dia mety hampitombo ny risika amin'ny rà. Mitombo ny risika amin'ny fampiasana aspirinina, NSAID, na warfarin.
Sorohy ny SNRI na ampiasao am-pitandremana amin'ireo marary manana zoro tery anatomika tsy voatsabo (glaucoma fanidiana fehizoro). Anontanio ny mpiasan'ny fahasalamanao raha tandindomin-doza ianao.
Rehefa mitsahatra tsy mandray Pristiq na Effexor ianao dia anontanio ny mpanome fitsaboana anao ny fandaharam-potoanany. Ny fampijanonana tampoka dia mety miteraka soritr'aretin'ny fisintahana toy ny fisaleboleboana, fangovitana, fikorontanana ary fikolokoloana. Ny fampihenana ny doka tsikelikely dia afaka manampy amin'ny fisorohana ireo soritr'aretina ireo.
Hyponatremia (haavon'ny sodium ambany) noho ny sendikan'ny tsiranoka antidiuretic hormone (SIADH) mety tsy hitranga. Ny marary dia mety hahatsapa aretin'andoha, sarotra ny mifantoka, tsy fahatomombanan'ny fahatsiarovana, fisafotofotoana, fahalemena ary tsy fahatokisan-tena, mety hitarika any amin'ny fianjerana. Tranga misimisy kokoa mety hitranga. Ny marary dia tokony hitady fitsaboana vonjy maika raha sendra soritr'aretina ary ajanona ny SNRI.
Aza mitondra fiara na miasa milina mandra-pahafantatrao ny fiantraikan'ny Pristiq na Effexor aminao.
Miresaha amin'ny mpitsabo anao momba ny fampiasana Pristiq na Effexor raha manana tantaram-panintonana ianao.
Amin'ny tranga tsy fahita firy, dia efa nisy ny tatitra momba ny fihenan'ny fivontosana sy ny mahazaka / ny fiasan'ny anaphylaxis systemic na angioedema. Raha sendra soritr'aretina maimaika na mahazaka aretina ianao dia ajanony ny fitsaboana Pristiq na Effexor ary mitadiava fitsaboana avy hatrany. Aza mihinana Pristiq na Effexor raha tsy mahazaka ireo akora ireo ianao.
Ny tranga tsy fahita firy amin'ny aretin'ny havokavoka interstitial sy ny pnemonia eosinophilic dia mifandray amin'ireo fanafody ireo. Raha mandray Pristiq na Effexor ianao ary tsy mahatsiaro fofonaina, kohaka, na mahazo aina eo amin'ny tratra dia mitadiava fitsaboana haingana.
Pristiq na Effexor dia tokony hampiasaina amin'ny fitondrana vohoka raha toa ka lehibe kokoa noho ny loza ateraky ny zaza ny tombony ho an'ny reny. Ny fijanonana ny fanafody dia mety hiteraka famerenan'ny fahaketrahana na fitaintainanana. Noho izany, ny marary dia tokony hodinihina isaky ny tranga. Ny mpitsabo anao dia afaka mandanjalanja ny loza ateraky ny tombony amin'ny fampiasana SNRI mandritra ny fitondrana vohoka. Ny neonates voarohirohy amin'ny SNRI amin'ny trimester fahatelo dia namorona fahasarotana mitaky fampidirana hopitaly lava, fanampiana ny taovam-pisefoana ary famoahana fantsona. Raha efa eo amin'ny Pristiq na i Effexor ianao ary mahita fa bevohoka ianao dia mifandraisa avy hatrany amin'ny mpitsabo anao.
Pristiq: Mandrosoa takelaka iray manontolo, misy rano. Aza mitsako, manorotoro, mandrava, na mizara ny takelaka.
Effexor XR: Mitelina kapsula feno rano. Aza zaraina, potehina, tsakoo, na apetraho ao anaty rano ilay kapsily. Raha tsy izany, azonao atao ny manokatra ny kapsily, mamafazo ny atiny amina sotro epalety iray avy eo, ary atelina eo no ho eo ilay fangaro, arahin'ny fisotro rano iray vera.
Fanontaniana napetraka matetika momba ny Pristiq vs. Effexor
Inona ny Pristiq?
Pristiq dia antidepressant SNRI. Pristiq dia mitsabo ny fahaketrahana amin'ny olon-dehibe. Ny anarana mahazatra dia desvenlafaxine.
Inona no atao hoe Effexor?
Effexor koa dia antidepressant SNRI. Effexor dia mitsabo ny fahaketrahana amin'ny olon-dehibe. Effexor XR (famoahana maharitra) dia mitsabo ny fahaketrahana, ny aretina amin'ny tebiteby ara-tsosialy, ny fikorontanan'ny tahotra ary ny aretina mitebiteby amin'ny ankapobeny. Ny anarana mahazatra an'ny Effexor dia venlafaxine.
Mitovy ve i Pristiq sy i Effexor?
Ireo fanafody dia tena mitovy. Rehefa i metabolista ao amin'ny vatana i Effexor dia mivadika ho desvenlafaxine, ilay singa mavitrika Pristiq. Ireo fanafody roa ireo dia mitovy fa misy fahasamihafana vitsivitsy, toy ny fatra, ny vidiny, ny tahan'ny voka-dratsin'ny tranga ary ny fifandraisan'ny zava-mahadomelina.
Tsara kokoa ve i Pristiq na i Effexor?
Ireo fanafody roa ireo dia mitovy amin'ny fahombiazany. Ny mpitsabo anao dia afaka mitarika anao momba izay fanafody mety aminao.
Afaka mampiasa Pristiq na Effexor ve aho mandritra ny fitondrana vohoka?
Manontania torohevitra amin'ny mpitsabo anao. Handanja ny tombony azony izy mandray antidepressant vs. ny loza ateraky ny zaza . Neonates iharan'ny antidepressants sasany, ao anatin'izany ny SNRI na SSRI (mpanakana ny serotonine reuptake toy ny Prozac), amin'ny telovolana fahatelo amin'ny fitondrana vohoka, dia niteraka fahasarotana lehibe.
Raha efa ao amin'ny Pristiq na Effexor ianao ary mahita fa bevohoka ianao dia manatona ny OB-GYN anao avy hatrany hahazoana torohevitra. Raha toa ianao ka fampinonoana , jereo ihany koa ny OB-GYN-nao.
Azoko atao ve ny mampiasa Pristiq na Effexor amin'ny alikaola?
Tsia. Pristiq na Effexor dia tsy tokony alika amin'ny alikaola satria ny fitambarana dia mety hampitombo ny mety ho famoizam-po amin'ny taovam-pisefoana (mihena ny fifohana rivotra, tsy mahazo oksizena ampy) ary mampitombo ny fitoniana sy ny fahamendrehana ary manimba ny fahamailoana. Ny fitambarana koa dia mety hampitombo ny ahiahy sy ny fahaketrahana.
Manampy amin'ny fitaintainanana ve i Pristiq?
Na dia Pristiq aza dia asiana fitsaboana ny fahaketrahana fotsiny, ny dokotera sasany dia manome an-tsoratra azy io ho an'ny fitaintainanana. Na izany aza, ao amin'ny fitsapana amin'ny klinika , 3% amin'ireo marary izay nitondra Pristiq 50 mg (ny fatra voatondro) dia niaina fanahiana ho vokany. Mila manandrana ny olona sasany fanafody isan-karazany hijery izay mety indrindra. Manontania mpitsabo anao raha mila fanazavana fanampiny.
Pristiq ve mampiorina ny toe-po?
Ny zava-mahadomelina voasokajy ho fanamafisam-po dia mazàna ampiasaina hitsaboana aretim-bipolar. Pristiq dia aseho amin'ny fitsaboana ny fahaketrahana. Ny fakana Pristiq dia mety hahatonga ny toe-tsainao hahatsapa ho milamina kokoa, saingy tsy voasokajy ho toy ny mpampitony toetra izany. Pristiq dia antidepressant SNRI.
Ny venlafaxine ve SNRI?
Ie. Effexor (venlafaxine) dia SNRI. Ny SNRI hafa ho an'ny fahaketrahana dia misy Pristiq (desvenlafaxine), Fetzima (levomilnacipran), ary Cymbalta (duloxetine).
Pravastatin vs. Lipitor: fahasamihafana, fitoviana ary iza no tsara kokoa aminao
Rahoviana aho no tokony hiahiahy momba ny zavaboary?
ny fomba fanamboarana ny tenda maharary mandritra ny alina
inona no fanafody tsara indrindra amin'ny mucus
tsara kokoa noho ny fanafody fivarotana fanafody gripa
inona no ampiasaina amin'ny levitra 20 mg